Igwe friji a Panasonic a kacha njọ maka ibi ndụ ịla n'iyi | Akụkọ akụrụngwa
Na IFA, nke a na-eme ụbọchị ndị a na Berlin, nke anyị gwara gị ozugbo, ọ bụghị naanị na kọmputa na oge ezumike ka egosiri, mana ndị na-emepụta egosipụtakwala anyị ngwa ngwa nwere ọgụgụ isi na ha chọrọ inyere anyị aka n'ụbọchị ahụ. ruo taa. Panasonic gosipụtara ihe ngosi nke ihe ga-abụ ihe dịka afọ 5 Igwe nju oyi nke ga-agabiga na iwu olu ka ị bịaruo ọnọdụ anyị nso nke ezigbo biya, ma ọ bụ ngwaahịa ọ bụla ọzọ anyị debere n'ime. Dabere na ụlọ ọrụ ahụ, e mepụtara friji a ka ndị agadi nwere obere ike ịgagharị agagharị oge ọ bụla ha chefuru ihe.
Echiche nke ụlọ ọrụ Japan bụ ịgbakwunye elu gaa n'elu na-efere ndị anyị tinyere n’elu ha dị ọkụ, n'ụzọ dị otú a, anyị ga-ezere ịza efere na tebụl nakwa na oyi na-atụ ha ma ọ bụrụ na ndị na-eri nri were ogologo oge karịa ịnọdụ ala rie nri. Dịka ị nwere ike iweta efere, ị nwekwara ike iburu ha ozugbo na kichin, na-arụ ọrụ nke ndị na-elekọta ụlọ (na anaghị m ekwu na ndị mmadụ) ejirila n'oge gara aga.
Igwe nju oyi a jiri sistemụ LIDAR ịmara n'oge niile ebe ịkwesịrị ịkwaga ma zere ihe niile dị n'ụzọ. Mana karie otu onye n'ime unu echegoro na obu ezie na emebere friji a maka ndi agadi, ya na nsogbu mmeghari, ngwa oru a di nma maka mgbe anyi na egwurie egwu bọọlụ, na-enwe egwuregwu anyi masiri anyi ma obu ihe ndi ozo anyi na enweghi ike ịkwụsị gbaa ume anyị ume. A gaghịzi na-eti mkpu n'ụlọ na-arịọ mmadụ ka o wetere anyị ihe anyị toụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Igwe friji Panasonic a kachasị njọ maka ibi ndụ na-anọkarị
MINI Electric Concept, nyocha nke ihe nlele eletrik nke gha aputa na 2019